Goethite amethyst, diso antsoina koa hoe cacoxenite amethyst - video
Tags ametista, Cacoxenite, Goethite
Goethite amethyst, diso antsoina koa hoe cacoxenite amethyst
Nisy olona nanamarika ireo fikajiana ireo ho tahaka ny cacoxenite noho ny fitovian-java-mitovitovy amin'izany mineraly izany, saingy ny amethyst miaraka amin'ny cacoxenitemay dia tsy misy mihitsy.
Nantsoina ara-tantara hoe cacoxenite tany Brezila. Tsy ela akory izay dia vita ny fandalinana natao tamin'ny empirika ary tamin'io fotoana io dia tara loatra ny nanova ny milina marketing ary fahazarana ny olona hiantso azy hoe cacoxenite.
Ny firotsahana ho an'ny Goethite dia mamorona fehintsoratra mavo manopy mavo ka volontsôkôlà toa ny kifafa.
Avy amin'ny amethy amethyst
Ity fitaovana ity dia mahazatra ny amethystika izay avy amin'ny manodidina an'i Ametista do Sul, antsoina hoe Sao Gabriel, Rio Grande do Sul, Brezila.
Goethite dia oxyhydroxide vy misy vy ferric. Izy io no singa lehibe amin'ny orana vy sy maloto maimaimpoana. Ny hamafisin'ny Goethite dia avy amin'ny 5.0 ka 5.5 ao amin'ny Skala Mohs, ary ny fahasamihafana misy azy dia miovaova amin'ny 3.3 ka 4.3. Ny mineraly dia manome kristaly fanjaitra toa ny kristaly fanjaitra, fanjaitra vy, fa mavesatra kosa matetika.
Ny feroxyhyte sy lepidocrocite dia polymorphs vy Fehidhyxoksida FeO (OH) izay miorina amin'ny tsindry sy ny mari-pana ao amin'ny tany. Na dia manana simika simika mitovy amin'ny goite aza izy ireo, ny endriny samy hafa kristaly dia mahatonga azy ireo mineraly miavaka.
Ankoatr'izay, goite dia misy polymorph avo be sy avo lenta, izay mety mifandraika amin'ny toe-javatra iainan'ny Tany.
Goethite amethyst quartz
Amethyst dia karazam-boninkazo volomparasy somary volomparasy ary mandoa ny lokon'ny violet amin'ny hazavana, ny fandotoana vy ary amin'ny tranga hafa metaly tetezamita hafa, ary ny fisian'ny singa mandinidinika hafa, izay miteraka lozisialy kristaly saro-takarina. Ny hamafin'ny fitrandrahana mineraly dia mitovy amin'ny quartz, noho izany dia mety tsara amin'ny fampiasana firavaka.
Amethyst dia hita ao amin'ny hues voalohany avy amin'ny violet mavokely mavokely hatramin'ny volomparasy lalina. Amethyst dia mety maneho ny iray na roa hues faharoa, mena ary manga.
Ny haavon'ny ametyst dia matetika mamaritra ny lokon'ny amethyst mifangaro amin'ny endriky ny endriky ny kristaly. Ny lafiny iray amin'ny lafiny ny lapidary dia ny manapaka tsara ny vato hametrahana ny loko amin'ny fomba izay mahatonga ny feon'ilay vovobony vita mivolombolamena. Matetika, ny fisehoan-javatra indraindray dia misy loko volomparasy mipetaka eo amin'ny vato na ny loko dia tsy manavakavaka ho an'ny fahasimbana sarotra.
Goethite amethyst avy any Brezila
Mividiana ametista voajanahary ao amin'ny fivarotana
Tags ametista, Quartz
Home | Mifandraisa aminay